Su'aalaha had iyo jeer la isweydiiyo ee ku saabsan fayraska corona ee loogu talagalay qaxootiga ku jira Saxony-Anhalt – Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Su’aalaha had iyo jeer la isweydiiyo ee ku saabsan fayraska corona ee loogu talagalay qaxootiga ku jira Saxony-Anhalt
Waxaan isku dayeynaa inaanu macluumaadka ku saabsan Corona ka dhigno mid la socda illaa iyo intii suurtagal ah. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan wax badan uga baranno, waxaan u cusbooneysiin doonaa boggan.
Laga bilaabo Maarso 24, 2020
1 Sidee maamulka iyo maxkamadaha u shaqeeyaan?
2 Sideen ku heli karaa ogolaansho degenaansho cusub ama kordhin?
3 Ka waran dheefaha iyo dhimista waxtarka?
4 Ka waran waqtiga kama dambaysta ah ee Dublin iyo u-wareejinta?
5 Maxaad sameyneysaa haddii aad ka shakido Corona?
6 Maxuu yahay karantiil guryuhu?
7 Waa maxay macnaha “Kontaktsperre”?
8 Xagee caawimaad uga heli karaa su’aalahayga?
9 Xageen ka heli karaa macluumaad dheeri ah?
Sidee maamulka iyo maxkamadaha u shaqeeyaan?
Saxony-Anhalt ma jiro tilmaamo caadi ah oo tan loogu talagalay. Tan waxaa go’aamiya degmooyinka iyo magaalooyin madaxbannaan.
Saacadaha xafiiska ayaa aad u kooban.
Xaaladaha qaarkood, ogolaanshaha degenaanshaha iyo dulqaadashada ayaa lagu kordhiyaa qoraal ahaan waxtarkana waxaa la bixiyaa muddo dheer.
Weydii taleefan, emayl ama fakis in ballamadaadu u dhacdo sidii loo qorsheeyay iyo in ay suurtagal tahay in lagu ballaariyo adeegyada boostada, fakis ama emayl. Haddii loo baahdo, codsi qoraal ah ugu gudbi, fakis ama emayl.
Waxaad ka heli kartaa shaxanka dalabka loogu talagalay kordhinta halkan:
Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Qaxootiga (BAMF):
Qaarkood waxay ka heli karaan ogeysiin Xafiiska Federalka (BAMF) oo ku saabsan nidaamka magangalyadooda. Haddii go’aanka diidmada yahay, waad xereyn kartaa cabasho. Codsiyada sharciyeed ee maxkamadaha maamulka ayaa hadda xiran. Fadlan la xiriir qareenkaaga ama xarumaha talobixinta emayl ama taleefan. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa Golaha Qaxootiga ee Saxony-Anhalt si aad uga hesho talo ku saabsan tixraacyada. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waad xereyn kartaa dacwad ka dhan ah go’aanka diidmada ee magangalyada xun. Waxaad ka heli kartaa shaxdan halkan:
Dacwada waa in loo gudbiyaa qoraal ahaan maxkamada awooda u leh maalinta ugu dambeysa warqadda (waqtiga kama dambeysta ah ee racfaanka).
Xafiiska sharciga ah ee VG Halle wuxuu bixiyaa tusaalooyin dheeri ah:
Illaa iyo hadda, Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Qaxootigu guud ahaan wuxuu u aqbali doonaa codsiyada magangalyada qoraal ahaan, codsadayaashu waxay ku heli doonaan ogolaanshiyaha joogitaanka sababtan. Xaaladaha qaaska ah, gaar ahaan kuwa la xiriira amniga, ugu yaraan hal fursad ayaa lagu bixiyaa dowlad-goboleed kasta oo federaali ah si ay codsi shaqsiyadeed u codsadaan. Dhageysiga shaqsiyeed ee sababaha shaqsiyeed ee la cararayo iyo howsha sii socota ee laxiriira codsiyada magangalyada ayaa dhici doonta sida ugu dhaqsiyaha badan tan mar kale.
Faahfaahin dheeri ah:
Sideen ku heli karaa ogolaansho degenaansho cusub ama kordhin?
Waraaqaha kordhinta ayaa hada la fududaynayaa waana la oggol yahay iyada oo aan lala xidhiidhin hay’adda. Xaaladaha shaqsiyadeed, hase yeeshe, kani waa in laga codsadaa xafiiska waaxda socdaalka. Waxaad kaliya heli kartaa waraaqaha ku meel gaarka ah, tusaale ahaan “shahaadada khiyaamada” ama warqad ka timid xafiiska socdaalka. Waraaqahaani waxay noqon karaan bedel ansax ah mudada xaalada qaaska ah – fadlan weydii kiisaska shaqsiyadeed hay’adda ama xarunta talasiinta.
Ka waran dheefaha iyo dhimista waxtarka?
Gargaarka lacageed waa in la wareejiyaa haddii ay suurtagal tahay. Haddii aadan lahayn koonto, waxaad u oggolaan kartaa maamulka inuu ku wareejiyo lacagta akoonka qof aamin ah.
Hoos u dhigga gargaarada guud ahaan lama baabi’inayo, laakiin waa in xaalado badan aysan jiri doonin. Dadka sida muuqata aan loo masaafurin karin dhibaatada Corona (tusaale ahaan maxaa yeelay duullimaadyo aan u aadin dalka loo aado) waa inay guud ahaan helaan faa’iidooyin buuxa, xiitaa haddii aysan ka qeybgal ama wax la mid ah. waa lagu eedeeyay.
Ka waran waqtiga kama dambaysta ah ee Dublin iyo u-wareejinta?
Ku wareejinta Dublin ee ka socota Jarmalka ayaa hadda la hakiyey.
Waqtiga wareejinta ayaa – nasiib darro – sidoo kale la hakiyey. Waraaqooyin ayaa hada loo diraa kuwa ay khusayso iyaga oo sheegaya in mudada wareejinta ay dib u bilaaban doonto mar alla markii la soo wareejiyo mar kale. PRO ASYL waxay u qiimeysaa aasaaska sharciga mid su’aal laga qabo. Haddii aad hesho warqaddan oo kale, fadlan la xiriir xarunta la-talinta, qareenkaaga ama Golaha Qaxootiga.
Fadlan sidoo kale la soco macluumaadka wax ku oolka ah ee wareejinta Dublin (Jarmalka oo keliya): https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/wp-content/uploads/2020/03/pro-asyl_erbb_praxishinweise-auslassung-dublin_08.04.2020-1.pdf
Maxaad sameyneysaa haddii aad ka shakido Corona?
Haddii aad u maleynaysid in adiga ama kuwa kale aad cudur ku qaadi kartaan fayraska corona, fadlan wac takhtarkaaga ama waaxda caafimaadka ee magaaladaada. Halkaas waxaad ku weydiisaneysaa baaritaan. Baadhitaan bilaash ah ayaad ku heli kartaa haddii aad xidhiidh la yeelatid qof cudurka qaba coronavirus ama haddii aad ku jirtay aag qatar ah. Meelaha halista ah waa Iran, Italy, Austria, Spain iyo France, China iyo South Korea. Waxaad sidoo kale wici kartaa heeganka caafimaadka 116 117.
Maxuu yahay karantiil guryuhu?
Haddii adiga ama xubin qoyska ka mid ah aad ku qaadsiisaan fayraska Corona, adiga iyo qoyskaaguba waa laydinka takhalusi doonaa. Taas macnaheedu waa in aan laguu oggolayn inaad ka baxdid aqalkaaga ugu yaraan 14 maalmood. Tani waa xaalad aad u adag, gaar ahaan markii carruurta ay sidoo kale saameeyaan. Waa muhiim inaad isdejiso oo aad telefoonka kula xiriirto ehelkaaga iyo asxaabtaada.
Haddii qof kale oo gurigaaga ku dhex jira uu cudurku ku dhacay, waxaa suurtagal ah in dhammaan ama qayb ka mid ah hoygaaga la karantiilayo. Iyada oo ay weheliso deganeyaasha kale, waad ka fikiri kartaa waxa shuruudaha aad uga baahan tahay maamulka guriga ee kiiskan. Tusaale ahaan, waad weydiisan kartaa guri bilaash ah oo bilaash ah guriga dhexdiisa. Waxa kale oo aad kalahadli kartaa hawlwadeenka wixii ku saabsan cuntada ay u ekaan doonto hadii ay dhacdo karantiil. Haddii aad qabtid wax su’aalo ah, fadlan la xiriir Golaha Qaxootiga.
La xiriir Golaha Qaxootiga ee Saxony-Anhalt
Telefoon: 0391-50549613 ama 0345-44502521
Iimayl ahaan: info@fluechtlingsrat-lsa.de
Waa maxay macnaha “Kontaktsperre”?
Mamnuucida xiriirada ma aha xirid guri. Waad aadi kartaa banaanka, tusaale ahaan inaad lugeyso, dukaamaysatid ama aad aadid shaqo. Si kastaba ha noqotee, in kabadan laba qof ayaa laga yaabaa inaysan wada joogin bannaanka; koox ka kooban saddex ama in kabadan ayaa la hadli kara oo kala diri kara booliska iyo saraakiisha fulinta sharciga. Ganaaxyadu waa dhawyihiin. Tani ma khusayso waalidiinta iyo qoysaska iyo sidoo kale dadka ku wada nool hal guri.
Xagee caawimaad uga heli karaa su’aalahayga?
Talada gaarka ah iyo daryeelka (gBB) waxaan helaa caawimaad hadii aanan wali haysan magangalyo (ogolaansho) ama joogitaan aamin ah (dulqaadasho) oo aan qabo su’aalo ku saabsan joogitaankeyga, nidaamka magangalyadeyda ama adeegyadeyda, tusaale ahaan.
Waxaan taageero ka helaa Adeegga La-talinta Socdaalka (MBE) haddii aan horey u haysto deggenaansho ama magangalyo oo aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo su’aalaha ku saabsan noloshayda Jarmalka.
Talada nidaamka magangalyada ee Halberstadt, Magdeburg iyo Bernburg waxaan kahelaa talo la xiriira nidaamka magangalyadayda.
Adeegga Hijrada Dhallinyarda (JMD) wuxuu iga caawiyaa dhammaan su’aalahayga ku saabsan noloshayda Jarmalka (oo ay ku jiraan degenaanshaha iyo magangalyada) markaan jiro inta u dhaxaysa 12 iyo 27 sano.
La-talinta dhibanaha mobilada (MOB) ayaa i caawisa haddii aniga igu saameeyo garabka midig, cunsuriyadda ama rabshadaha anti-Semitic.
Xarunta cilmi-nafsiga ee soo-galootiga ee Saxony-Anhalt (PSZ) Waxaan ku heli karaa la-talin nafsi ah iyo daweyn haddii, tusaale ahaan, aan waayo-aragnimo argagax leh ka qaxey markii aan cararayo ama haddii aanan si fiican u fiicnayn sababo kale awgood.
Waxaan ku bixinnaa liis cinwaan dhammaan xarumaha talo bixinta halkan: https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/
Waxaan ku soo uruurinay macluumaad dheeraad ah bartayada internetka:
War-saxaafadeedkeenna oo la xiriira baahida siyaasadeed ee qaxootiga marka loo eego cudurka ‘corona’:
Posted in Macluumaadka macluumaadka, Wararka and tagged Corona, COVID-19